I-Aragonese Pyrenees: konke odinga ukukwazi ukukuvakashela | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | | España, General, Yini ongayibona
IPyrenees yase-Aragonese inendawo ebanzi esukela ezigodini ezisentshonalanga yeNavarra iye komasipala abakha IRibagorza nalowo mngcele iCatalonia. Ingenye yezindawo eziphakeme kakhulu zezintaba eNhlonhlweni yase-Iberia enezintaba eziphakeme kakhulu ze- ibanga lezintaba ze-pyrenean. Ukuphakama nge Aneto, the Ukukhweza okulahlekile noma i Ama-Posets zidlula amamitha ayizinkulungwane ezintathu ukuphakama.
Ngakho-ke, i-Aragonese Pyrenees ikunikeza izindawo ezinhle kakhulu ezenziwe ngezigodi, imifula yasendle, amahlathi, izinguzunga zeqhwa namachibi, kanye nendawo yokugcina izilwane nezilwane ezingavamile. Kepha uzothola kuwo amadolobha amahle idalwe ngokususelwa kubuciko obudumile, izikhumbuzo eziningi kanye ne-gastronomy enhle. Uma ufuna ukuyazi, sizokukhombisa ezinye izindawo ezifanele ukuvakashelwa nguwe.
1 I-Ordesa y Monte Perdido National Park
2 Isigodi saseBenasque
3 Ibon of Anayet
8 I-gastronomy yama-Aragonese Pyrenees
I-Ordesa y Monte Perdido National Park
Njengoba inendawo ecishe ibe amahektha ayizinkulungwane eziyishumi nesithupha, itholakala endaweni yase Ukuzikhukhumeza. Iphethe izihloko zeBiosphere Reserve, Indawo Yokuvikela Ekhethekile Yezinyoni kanye Amagugu Emhlaba. Izimbali zayo zifaka izinhlobo zasendaweni ezikhona njengasemngceleni wepayini namahlathi e-beech, fir noma iphayini, kuyilapho izilwane zayo zivelela ubukhona obubalulekile benqe elinentshebe, i-chamois noma ibhere elinsundu.
Ipaki lonke liyisimangaliso sangempela, kepha okugqamile kuyo yipaki uqobo lwayo Isigodi se-Ordesa naleyo yasePineta, i-Añisclo canyon, imihosha yase-Escuaín, isekisi laseGavarnie (eselivele liseFrance), ichibi laseHelado nempophoma yeSoaso.
Itholakala phansi kwezintaba ze-Aneto, Posets nePerdiguero, lesi sigodi siyikhaya lemifula, amachibi namahlathi amahle kakhulu. Ungayifinyelela nge Umfula iVentamillo, umhosha omangazayo onezindonga ukuphakama kwamamitha angamakhulu amathathu.
Uzothola endaweni enhle amadolobha ajwayelekile afana nawo uqobo I-Benasque; Cerler, lapho kunendawo yokushibilika eqhweni; ISesué, enesonto le-XNUMX leLombard Romanesque; I-Arasán, enesonto le-XNUMX, noma iLiri, lapho uzobona khona indawo ye-Twelve Cascades.
Ibon of Anayet
Uma kwenzeka ungazi "Ibon" igama elisetshenziswe ku-Aragonese le amachibi afriziwe anemvelaphi yeqhwa. Kula Isigodi saseTena Cishe baba ngamashumi ayisikhombisa, kepha ama-Anayet avelele ngaphezu kwawo wonke amanye. Lesi sakhiwo sakhiwa isiqongo segama elifanayo namachibi amaningana ongafinyelela kuwo kusuka kuFormigal, lapho ubuye ube ne-ski resort.
Esigodini saseTena uzothola elinye lamadolobhana amahle kakhulu ePyrenees yase-Aragon: iLanuza. Okwamasipala we Salent de Gállego futhi yidolobha elihle eliqukethe izindlu ezakhiwe njengezintaba ezakhiwe ngamatshe nangesileti. Itholakala osebeni lwechibi elinegama elifanayo futhi esontweni lalo linentengo yesiliva kusukela ngekhulu le-XNUMX.
Leli dolobha elincane alinayo imfucuza. Izindlu zabo nazo zisabela kwisitayela esehlukile sentaba yase-Aragon. Ngaphezu kwalokho, phakathi kokunye kunemigwaqo emincane ebanzi ebizwa ngamasentimitha angamashumi amahlanu ububanzi ubuciko. Ngokunjalo, isonto lalo lesifunda lisukela ngekhulu le-XNUMX futhi linezitho kusukela ngekhulu le-XNUMX kanye ne-altare elenziwe ngoBaroque. Baqokomisa nombhoshongo wangenkathi ephakathi lapho, ngokusobala, wayeyisiboshwa UBlanca II weNavarra kanye ne-Ethnological Museum, lapho ungazijwayeza khona ngamasiko ama-Ansotan.
Kutholakala esifundeni se iJacetania, licwile emlandweni, leli dolobha lidume ngokuhlaba umxhwele isiteshi sesitimela Yavulwa ngu-Alfonso XIII ngo-1928. Njengamanje ayisebenzi, kepha bekuyisitobha sokugcina ngaphambi kokuya eFrance futhi ngesikhathi seziyaluyalu ngekhulu lama-XNUMX yaqoqa izinganekwane ngezinhloli nangamagugu afihliwe. Kuyisakhiwo esihle lapho amafasitela amakhulu angaphansi kwamakhothamo ayisiyingi nophahla lwamasilayidi evelele. Kepha, ngaphezu kwakho konke, i-dome yayo enkulu emaphakathi izokudonsa ukunaka kwakho.
Ungabona futhi kuleli dolobha elihle i Isibhamu Turret, isakhiwo sezempi esivela eXIX; inqaba yaseColl de Ladrones, okulondolozwe olungaphambili lwasenyakatho; i Isonto laseRomeesque le-Assumption, enezinsimbi eziningana ze-altare, noma umbhoshongo wase-Aznar Palacín (ngekhulu le-XNUMX).
Okubaluleke ukudlula okwedlule idolobha laseJaca, inhlokodolobha yesifunda saseJacetania. Itholakala eCanal de Berdún, ithala lohlobo lwe-fluvioglacial futhi inezikhumbuzo ezinhle kakhulu.
Okuthandwa kakhulu yinqaba yaseSan Pedro o UJaca Citadel. I- ISanhedro Cathedral, eyakhiwa ngekhulu le-XNUMX futhi ithathwa njengeyokuqala ukwakhiwa eSpain kulandela imigomo yamaRoma. Ngaphezu kwalokho, kufanele ubone iRoyal Monastery yamaBenedictine nesonto laseCarmen, elinye nelinye kusukela ngekhulu le-XNUMX; iClock Tower, iGothic yangekhulu le-XNUMX; ibhuloho lasendulo leSan Miguel futhi, ngaphandle kwedolobha, inqaba yaseRapitán nokuhlaba umxhwele I-Royal Monastery yaseSan Juan de la Peña.
Noma kunjalo, lezi ngezinye zezindawo ongazivakashela e-Aragonese Pyrenees. Kepha kunabanye abaningi. Ngokwesibonelo, Amapaki emvelo eziGodi zaseNtshonalanga kanye neSierra y Cañones de Guara noma i Isigodi saseGistaín, okuhlukaniswa ngokomlando okusho ukuthi amasiko akhohliwe kwezinye izindawo agcinwa lapho. Kepha, uma uvakashela le ngxenye yamaPyrenees, uzothanda nokujabulela i-gastronomy yayo.
I-gastronomy yama-Aragonese Pyrenees
Ukuphakama kwale ndawo kwenza ubusika buqine futhi bube bude. Ngalesi sizathu, i-gastronomy yayo ejwayelekile yakhiwa izitsha ezinomsoco kanye nekhalori. Omunye wemikhiqizo yawo eyaziwa kakhulu iwundlu lase-Aragón, iwundlu elincane lapho konke kusizakala ngakho konke. Isibonelo, ngamathumbu abo, inhliziyo namaphaphu benza ifayili le- i-kiretas, uhlobo lwesoseji enelayisi.
Ngokunjalo, imikhiqizo ethandwayo ikhona Embún boliches, ezenziwa ngobhontshisi nendlebe yengulube; i sbongile, ejwayelekile yeJacetania futhi ilungiswe ngemibilini yezimvu kanye ne Ikhekhe likaRibagorza, uhlobo lukaphayi.
Izitsha ezijwayelekile zendawo ziyisigaxa se- güey ku-Alforcha, ingulube yasendle eboshiwe; i-cod al ajoarriero noma isobho nokugqwala nezimpunga. Kepha ukwazi okwengeziwe kuzoba yi i-asparagus yentaba.
Ekuphetheni, i-Aragonese Pyrenees igcwele izimangaliso zemvelo, umlando, amadolobha amahle anezikhumbuzo eziningi kanye ne-gastronomy eqinile futhi enhle. Uma uyivakashela, ngeke uzisole.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Yini ongayibona » I-Aragonese Pyrenees, izimangaliso zemvelo nomlando omningi
Yini ongayibona eMérida